Dheer in Tareenku Safarada In Adduunka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Dheer in Tareenku Safarada In Adduunka
The safarada tareenka ugu dheer adduunka oo dhan waa mid aad u dheer! sodcaalladoodii Kuwani waxay qaadan kartaa dhowr maalmood oo ay ku daboolaan kun oo miles.
Sidaas, halkan sodcaalladoodii in ay qaataan ugu dheer Europe, Aasiya, Australia, iyo Maraykanka.
1: Trans-Siberian Express waa safar dheer tareenka
Duration: 6 maalmood +
safarka dheer tareenka ee dunida ka bilaabmay Moscow iyo dhamaanayaa Vladivostok. First of dhan, waxa ay qaadataa in ka badan 6 maalmood si ay u dhamaystiraan. Rakaabka on this safarka Yurub maraan goobaha waqti badan. Bbc Safar this waxaa ka mid ah Ural Mountains iyo Lake Baikal. Tareenadu safarka this kasta tagaan 48 saacadood.
Lake Baikal: gudubno dunida ee qotada dheer
Duration: 3+ maalmood
Tani safaradiisa safarka iyada oo Southeast Asia ka Bangkok in Singapore. joogsato The tareenka ee River Kwai iyo Kuala Kangsar. Muddada safarku waa midkood 3 ama 4 maalmood. Intaa waxaa dheer, sodcaalladoodii oo inta badan qaataan meelaha maalmaha fasaxa. Intaas waxaa sii dheer, hoyga waa gaarka loo leeyahay iyo wax xunna lagu qurxiyey. Maxaa yeelay, hoyga dheggan waxaa ugu wanaagsan waxaa ku haboon u safraya Solo.
Lyon in Tareenadu Lille
3: tareenka ugu dheer The Canadian
Duration: 3 maalmood
First of dhan, ma jiro wifi on this safarka transcontinental. Sidaas, diyaar garow in aad waqti eegaya muuqaal ah. Maxaa yeelay, buuraha, kaymaha, iyo muuqaalka dhirta kale Canadian waxaad arki doontaa waa breathtaking. Safarku wuxuu ka bilaabmay Vancouver iyo dhamaado Toronto. Ku raaxayso baabuurta qarsoodiga raaxo, halka aad ka heli bidhaaminaya ee faras duur, deerada, iyo xitaa orso.
4: California Zephyr tareenka ugu dheer
Duration: 51 saacadood
safarka Tani waa ugu xusid mudan sida ay tahay ugu dheer ee dalka Mareykanka. Safarku wuxuu daboolayaa Horseedka ah, Rockies ah, iyo canyons. The joogsato muhiim ah oo ku saabsan safarka waxa ay kala yihiin Denver, Salt Lake City, Reno, iyo Sacramento.
5: Indian Pacific: Sydney in Perth (Australia)
Duration: 65 saacadood
Tani waxay safar tareen dheer qoreysa stretch ugu dheer ee wadada toosan tareenka ee dunida. marka hore, Rakaabka u hesho in ay la kulmaan width of Australia. Intaa waxaa dheer, muuqaalka waxaa ka mid ah biyo-dhacyo, kaymaha, iyo buuro buluug ah. Sababtoo ah oo dhererkiisu, waxaa jira joogsiyada badan oo muhiim ah oo ku saabsan this wadada. joogsato waxaa ka mid ah Broken Hill, Adelaide, Barossa Valley, Kalgoorlie, Cook, iyo Rawlinna. Tigidhada tareenka safarka this waa qaali la qiimaha uu ka bilaabanayo ka badan $600.
6. Vivek Express: Dibrugarh in Kanyakumari (Hindiya)
Duration: 82 saacadood
Sidoo kale in Pacific Hindiya, tareen this waa safar dheer tareenka ee India. Sababta oo ah waxa u safri dhererka oo dhan Hindiya iyo leedahay xawaaraha celcelis ahaan of 32 KM saacadiiba. Marka la barbardhigo tigidhada kale sodcaalladoodii oo tareen dheer bilowga tareen this at $10.
7: Paris-tareenka ugu dheer Moscow Express
Duration: 48 saacadood
Inkasta oo tareen tani waa dheer trans-Yurub wadada kaliya ayay qaadataa 2 maalmood si ay u dhamaystiraan. Tareenka ayaa ka dhigeysa in ka caasimada Faransiiska wuxuuna yimid caasimada Ruushka. Maxaa yeelay, sodcaalku this dhex marta Belarus waxaad u baahan doontaa a visa Belarus in ay u safraan. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay fiiso aad ku soo gasho Russia.
Lyon in Tareenadu Marseilles
Bordeaux inay Tareenadu Marseilles
Ballansan aad safar tareen dheer la Save Tareenku
Tayaasha ah safar tareen dheer waa in aan waqti dheer qaato. Taasi waa sababta ugu Save Tareenku waxaan leenahay a hannaanka wax iibsiga tikidhada deg deg ah.
Soo gal in our website hadda, oo waxay qaadan 3 daqiiqo in la helo Ugu jaban tigidhada tareenka safarka ha u. Tigidhada laga gadan karaa iyadoo la isticmaalayo kaararka deynta iyo lacagta bangiga-waqtiga dhabta ah iyo dad badan oo fursado badan oo ku saabsan Save A tareenka website.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flongest-train-journeys-world%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ja si / ru ama / luqadaha TR oo dheeraad ah.
#Ruushka #Singapore #Thailand australia longtrainjourneys trainjourney tareen safarka travelfrance